Imbali yeeRbital Feral e-Australia
Umlando weeRbhu e-Australia
Iimvumi ziyintlobo ebangeleyo ebangele ukubhujiswa kwezinto eziphilayo kwilizwekazi lase-Australia iminyaka engaphezu kwe-150. Zizalisa ngokukhawuleza okungalawulwayo, zidle izityalo njengezikhumbi, kwaye zinegalelo elikhulu ekukhuliseni komhlaba. Nangona ezinye iindlela zokurhoxiswa komvundla karhulumente ziye zaphumelela ekulawuleni ukusabalala kwazo, uluntu lomdlavuza jikelele e-Australia lusekho ngaphaya kweendlela ezizinzileyo.
Imbali yeeRbhu e-Australia
Ngowe-1859, indoda egama layo linguTomass Austin, umnini-mhlaba waseWinchelsea, iVictoria yayingenisa izilwanyana ezingama-24 zaseNgilandi zaza zazikhupha zasendle ukuze zizingele imidlalo. Kwiminyaka emininzi, loo mivundla engu-24 yanda yaba zigidi.
Ngama-1920, engaphantsi kweminyaka engama-70 ukususela ekuqaleni kwayo, ummila wabantu baseOstreliya balinganiselwa kwi-bhiliyoni ezili-10, ukuvelisa kwisantya se-18 ukuya ku-30 ​​ngomvundla wesibini omnye ngomnyaka. Umvundla waqala ukufuduka ngaphesheya kwe-Australia kwireyithi ezingama-80 ngonyaka. Emva kokutshabalalisa ii-acre zezigidi zelizwe laseVictoria, ziwela ngaphesheya kweeNew South Wales, eMzantsi wase-Australia nase-Queensland. Ngowe-1890, imvundla yabonwa yonke indlela e-Western Australia.
I-Australia yindawo efanelekileyo kuyo umvundla omninzi. Iimvula zincinci, ngoko ziyakwazi ukuzalisa phantse malunga nonyaka. Kukho ininzi yelizwe elinokuphuhliswa kwezoqoqosho.
Ukunyuka kwezityalo eziphantsi kwezemvelo kubanika indawo yokukhusela nokutya, kwaye iminyaka yokuhlala ngokwahlukana kwendawo yashiye leli zwekazi ngaphandle kwezilwanyana zasendle kule ntsha.
Okwangoku, umvundla uhlala malunga neekhilomitha ezigidi ezi-2,5 ze-Australia kunye neengingqi eziqikelelwa kwezigidi ezingama-200.
IiRaberal zaseFraliya zaseAustralia njengeengxaki zezinto eziphilayo
Nangona ubukhulu bayo, ininzi ye-Australia iyimile kwaye ayifanele ngokupheleleyo kwezolimo.
Yiyiphi inhlabathi evumbileyokazikazikazikazi ngoku isongelwa ngumvundla. Ukutya okugqithiseleyo ngomvundla kuye kwanciphisa isimbozo semifuno, ukuvumela umoya ukuba ususe umhlaba ophezulu. Ukuguguleka komhlaba kuthintela ukutyhilwa nokutyalwa kwamanzi. Umhlaba onomhlaba ongenqongophe ungakhokelela ekuhlaselweni kwezolimo kunye nokwanda kosawoti. Icandelo lemfuyo e-Australia liye lachaphazeleka kakhulu ngumvundla. Njengoko izivuno zokunciphisa ukutya ziyancipha, ngokunjalo iinkunzi zeenkomo neegusha. Ukuhlawulela, abalimi abaninzi bayandisa imfuyo yabo kunye nokutya, ukulima indawo ebanzi yomhlaba kwaye ngokunjalo kube negalelo ngakumbi kwingxaki. Icandelo lezolimo e-Australia lilahlekelwe iibhiliyoni zeedola kwiimpembelelo ezingqalileyo kunye ezingekho ngqo kwi-infestation.
Ukuqaliswa komvundla kuye kwaye kwaxhamla iintlobo zasendle zasendle zase-Australia. Iimvumi ziye zatsho ngenxa yokutshatyalaliswa kwesityalo se-eremophila kunye neentlobo ezahlukeneyo zemithi. Ngenxa yokuba onogwaja bayakondla kwizityalo, imithi eninzi ayikwazi ukuvelisa, ekhokelela ekupheleni kwendawo. Ukongezwa, ngenxa yokuncintisana ngokuthe ngqo kokutya kunye nendawo yokuhlala, abantu abaninzi bezilwanyana zasekuhlaleni ezifana ne-bilby enkulu kunye ne-pigicoot-foot footed bandicoot iye yehla kakhulu.
Imilinganiselo yokuLawula iMvundla
Kwikhulu le-19 leminyaka, iindlela eziqhelekileyo zokulawula umvundla oguqwayo ziye zabekwa kunye nokudubula. Kodwa phakathi kowe-1901 no-1907, urhulumente wase-Australia wahamba ngendlela yelizwe ngokwakhiwa kwezicingo ezintathu zogqirha ukukhusela amazwe asefundisi aseNtshona Koloni. Ucingo lokuqala ludluliselwe iikhilomitha ezili-1,138 ngaphaya kwelo lonke icala laseNtshona Koloni, ukusuka kwindawo ekufutshane neCape Keravdren ngasenyakatho kwaye iphele kwiNxweme yeNkathazo ngasezantsi. Kucingelwa ukuba yindawo eqhubekayo yokuhlala eqhubekayo emhlabeni. Ucingo lwesibini lwakhiwe ngokukhawuleza lufana neyokuqala, ama-55 ukuya kwii-100 ukusuka ecaleni lasentshonalanga, ukuxhuma kwi-original ukuya kunxweme eselunxwemeni, esolula i-724 miles. Ucingo lokugqibela luya kumawaka angama-160 ukuya phezulu ukusuka kwesibini ukuya kunxweme olusentshonalanga yelizwe.
Nangona ubukhulu beprojekthi, ucingo lwalubonakala luphumelelanga, kuba amanqabana amaninzi awela ngaphesheya kwinqanaba elikhuselekile ngexesha lokwakha. Ukongezelela, abaninzi banqume indlela yabo ngokusebenzisa ucingo, ngokunjalo.
Urhulumente wase-Australia naye wazama iindlela zokwenza umthambo wendawo. Ngowe-1950, iinjongo kunye neentambo ezithwala igciwane le-myxoma zakhutshwa kwintlango. Le ntsho longwane, efumaneka eMzantsi Melika, ichaphazela kuphela onogwaja. Ukukhululwa kwakuphumelele kakhulu, njengoko kulinganiselwa ukuba i-90-99 iphesenti yomdla eAustralia yacinywa. Ngelishwa, ngenxa yokuba inkohlakalo neentlanzi azihlali kwindawo ezimileyo, amaninzi emivundla ehlala ngaphakathi kwilizwekazikazi ayinakuchaphazeleka. Ipesenti encinci yabemi nayo yavelisa ingcinezelo yemvelo kwintsholongwane kwaye yaqhubeka ikhiqiza. Namhlanje, malunga neepesenti ezingama-40 kuphela zogqithwa abasenaso isifo.
Ukulwa nokuphuculwa komsebenzi we-myxoma, iimpukane ezithwala isifo somdlavuza (RHD), zakhutshwa e-Australia ngo-1995. Ngokungafani ne-myxoma, i-RHD iyakwazi ukungena kwiindawo ezinomileyo. Esi sifo sincedisa ukunciphisa imilambo ngamaphesenti angama-90 kwimimandla eyomileyo. Nangona kunjalo, njenge-myxomatosis, i-RHD isagqitywa yi-geography. Ekubeni umkhosi walo ungumfutho, esi sifo sinempembelelo encinci kwiindawo ezipholileyo, iimvula eziphakamileyo zonxweme zaseAstreliya apho izimpukane ziphantsi kakhulu. Ngaphezu koko, imivundla iqalisa ukukhusela kwesi sifo, ngokunjalo.
Namhlanje, amafama amaninzi asasebenzisa iindlela eziqhelekileyo zokuphelisa onogwaja ezweni labo. Nangona uluntu lomdlavuza luyingxube yezinto ezazikuqaleni kwee-1920s, luqhubeka luxanduva lweenkqubo zezolimo kunye nezolimo. Baye bahlala e-Australia iminyaka engaphezulu kwe-150 kunye ne-virus epheleleyo ifumaneka, mhlawumbi baya kuba khona ngamakhulu ambalwa.
> Urhulumente waseOstreliya: Isebe loKhuseleko, uLondolozo, iManzi, uLuntu kunye noluntu (2011, Meyi 27). Izilwanyana zaseFeral e-Australia. Kubuyiselwa kwi: http://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/feral-animals-australia
> ABC Science (2009, Aprili 09). I-Australia ilwa ne-bunny. Ifunyenwe kwi: http://www.abc.net.au/science/articles/2009/04/08/2538860.htm
> Broomhall, FH I-Longest Fence ehlabathini. UCarlisle, eNtshona Koloni yase-Australia: I-Hesperian Press, ngo-1991
Okwangoku kunye neZimbali zabantu
Ixabiso lokuzalwa elingenanto
Ukuhla kweNabantu kwiRashiya
I-China Enye yeNkcazo yeNkqubo yoMntwana
Ulwazi loLuntu lweNkcukacha kunye neNkcukacha
Amazwe amaninzi angamaPolitiki ngo-2050
Iimpembelelo zehlabathi eziMnyama
Indlela Yokulungisa I-Defroster yakho yangemva
Iintlobo ezihlanu zePhulo lokuDaya
Indlela yokwenza iLines ye-Vinyl ye-Swimming Pool i-Smooth
Iintshonkotha: Isingeniso seZimo ezininzi ezidlobongela
Iilwimi zeModal neFraseological ngesiTaliyane
IYunivesithi yaseMigan Morris GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
UTheodore Roosevelt kunye neSebe lePolisa laseNew York
ISUNY Cortland GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Indlela yokusebenzisa i-Adverb ye-German 'Auch'
Indlela yokudlala ifomathi yeStableford okanye i-Modified yeFormford ifomathi
I-Comedic Female Monologue Ukususela kwi-Three-Act Play "Ikusasa lekusasa"
Ukuhlaziywa komkhiqizo weHobbs Creek Fly Reel
Indlela yokuphucula isigama sakho
Iifubane ziKhanya njani?
Imbali YaseShayina: IsiCwangciso Sonyaka Sesihlanu Sokuqala (1953-57)
Ukubambisana: Inkcazo kunye nemizekelo
USeptemba Omnyama: I-Jordanian-PLO Imfazwe Yabantu Yango-1970